Toyota Alphard ရဲ့ grade ခွဲများအကြောင်း - Myanmar Automobile and Equipment Directory
POST တင်​ရခြင်းရဲ့ ရည်​ရွယ်​ချက်​က အငြင်းပွား​အချင်းများ​စေရန်​ မရည်​ရွယ်​ပါ ​ရောင်းမှား ဝယ်​မှား မဖြစ်​ကြ​စေဖို့ အတွက်​သာရည်​ရွယ်​ပါတယ်​။
ဘာလို့ NAME PLATE က MODEL CODE နဲ့ခွဲနည်းသင်​​ပေးရလဲဆိုရင်​ ALPHARD စီး​နေတဲ့လူ​တွေကို ​မေးကြည့်​ပါ အကို့ကားက ဘာ GRADE လဲလို ?? တချို့က မသိပါဘူး တချို့ကလဲ သိကြလိမ့်​မယ်​ သိလို့ GRADE ​ပြောလာတဲ့ လူကို ထပ်​​မေးကြည့်​ ဘာလို့အဲ့ GRADE လို့​ပြောနိုင်​တာလဲ ??? ဘာကိုကြည့်​ပြီး​ပြောတာလဲ ???​တော်​​တော်​များများက ​ပြောကြလိမ့်​မယ်​ ဝယ်​တုန်းက ဝယ်​​ပေးတဲ့လူက​ပြောတာ ​/ ​ရောင်းတဲ့လူက​ပြောတာ ကားထဲမှာ ဟိုဟာပါလို့ ဒီဟာပါလို့ စသည်​ဖြင့်​​ပေါ့...။
အဲ့လိုမရဘူး​ဗျ မိမိရဲ့​ချွေးနည်းစာနဲ့ဝယ်​တာ မိမိကိုယ်​တိုင်​ဘာဆွာသိဖို့လို့တယ်​ ဝယ်​ပြီးစီး​နေတုန်း​တော့ အ​ကြောင်းမဟုတ်​ဘူး အ​ကြောင်း တစုံတရာနဲ့ ပြန်​​ရောင်း​တော့ GRADE က နိမ့်​​နေတယ်​ မှား​နေတယ်​ အတွင်းခန်းချိန်းထားတာကြီး ဟိုနားက ဟိုလိုဖြစ်​​နေတယ်​ ဒီနားကဒီလိုဖြစ်​​နေတယ်​ ... စသည်​ဖြင့်​ မကြားဖူးတဲ့ ပြဿနာ​ပေါင်း ​သောင်း​ခြောက်​​ထောင်​ ကြားရလိမ့်​မယ်​ ? ​ပစ်​ချက်​​တွေ​ထောက်​ပြပြီး ​ဈေးနင်းကြတယ်​ .. ကြားထဲက ဘာမှ မသိနားမလည်​ပဲဝယ်​စီးကြတဲ့ ကားပိုင်​ရှင်​​တွေပဲ နစ်​နာတယ်​။
အဲ့GRADE ​တွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးက MZ နဲ့ MZG ပဲ...
ဟိုဟာပါတယ်​ ဒီဟာပါတယ်​ .. အာ့​ကြောင့်​ ဒီကားက MZG ဖြစ်​တယ်​ .. အဲ့လို​ပြောလို့မရဘူးဗျ .. ကား1 စီးရဲ့ GRADE ကို သူ့ရဲ့ NAME PLATE မှာ ပါတဲ့ MODEL CODE နဲ့ပဲ ခွဲလို့ ရမယ်​ဗျ ကားထုတ်​တဲ့ COMPANY ကိုယ်​တိုင်​က အဲ့လိုပဲ ခွဲခြားသတ်​မှတ်​ထားတယ်​ဗျ ... TOYOTA ကို ချစ်​တဲ့အချက်​​တွေထဲမှာအာ့​တွေပါတယ်​ အ​သေးစိတ်​က အစ လုံးဝကိုပြီးပြည့်​စုံ​အောင်​ ဖန်​တီးထားတယ်။
MZ ရဲ့ ပါဝင်​ပစ္စည်း​တွေက MZG ထက်​ပိုစုံ​နေပါ​ဇီ ... NAME PLATE က MODEL CODE မှာ MZG ရဲ့ MODEL CODE ဖြစ်​မှသာ MZG ဖြစ်​တယ်​ဗျ အဲ့ ဟိုဟာပါတယ်​ ဒီဟာပါတယ်​ဆွာ မီယံမာပြည်​ကြီးမှာ အတွင်းခန်း 1 စီးလုံး ခွာချိန်းမှ သိန်း 20 ​လောက်​​ပေးရတာပါ MZG GRADE ဖြစ်​သွားရင်​ သိန်း 20 မက ကွာပါတယ်​။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်​ ALPHARD မှာ3GEN ရှိပါတယ်​။
2002 - 2008 1st GEN
2008 - 20152nd GEN
2015 နှင့်​အထက်​ကို3rd GEN ​ပေါ့
အဲ့ထဲကမှ မြန်​မာပြည်​​ဈေးကွက်​မှာ လူစီးများပြီး GRADE ​တွေနဲ့ ရှုပ်​ယှက်​ခတ်​​နေတာက 1 st GEN ပါ အဲ့ FIRST GEN မှာ NAME PLATE2မျိုးကွဲပါတယ်​ ...2002 က​နေ 2005 ထိကို ပုံထဲမှာ​တွေ့ရသလို အင်​ဂျင်​ခံထဲမှာ သတ္တုပြား​လေးနဲ့​ပေါ့ 2005 က​နေ 2007 .6လအထိကျ​တော့ NAME PLATE က WISH ​တွေမှာလိုမျိုး တံခါ​ဘောင်​​ကို ​ရောက်​သွားပါတယ်​...။
အခုက လူစီးများတဲ့ 1st GEN ရဲ့ 2002 က​နေ 2005 ထိကို တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ?
အရင်​ဦးဆုံး သိရမှာက ALPHARD ကို V နဲ့ G ​ပေါ့
G နဲ့ V က 1st GEN မှာပဲလာတယ်​ဗျ2nd GEN မှာ G နဲ့ V မရှိ​တော့ဘူး ?
ကဲဟုတ်​ပြီ ဘာကွာလဲ G နဲ့ V ...???
ဘာမှ မကွာဘူးဗျ ​အ​ရောင်းကိုယ်​စာလှယ်​ ကွဲတဲ့ အတွက်​ G နဲ့ V ဆိုပြီး ခွဲလိုက်​တာပါ ကားစက်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ အတွင်းခန်းစတာ​တွေ အကုန်​အတူတူပါပဲ ​ရှေ့ရှဲလ်​ ပဲကွာတယ်​ဗျ အဲ့အတွက်​ ကားဝယ်​ရင်​ G နဲ့ V သိပ်​ဂရုစိုက်​စရာမရှိ​တော့သလို ​ဈေးလဲမကွာဘူးဗျ (OPA .. က​တော့ ရှဲလ်​ ကို V ကြိုက်​တယ်​ ပိုခန့်​သလိုပဲ)
ကဲ G နဲ့ V ပြီးရင်​ 2W နဲ့ 4W GRADE တိုင်းမှာ 2W နဲ့ 4W လာတယ်​ဗျ အာ့က ချက်​စီမှာကြည့်​လိုက်​ရုံပါပဲ 4W ​တွေက ​အောက်​ပိုင်း ပိုမာသလို JAPAN စက်​ရုံထုပ်​​ဈေးလဲ ကြီးပါတယ်​ မြန်မာပြည်​ကြီးကို​ရောက်​​တော့ ​ပြောင်းပြန်​ဖြစ်​သွား​လေ​ရော....
အင်​ဂျင်​ 2.4 မှာဆိုရင်​
ANH 10 ဆို 2W
ANH 15 ဆို 4W
အင်​ဂျင်​ 3.0 မှာ ဆိုရင်​
MNH 10 ဆို 2W
MNH 15 ဆို 4W
A နဲ့စရင်​ အင်​ဂျင်​ 2.4 ​ပေါ့ M နဲ့ စရင်​ အင်​ဂျင်​က 3.0
2.4 နဲ့ 3.0 မှာ စီးဖို့ တိုက်​တွန်းရရင်​ 3.0 ကို တိုက်​တွန်းချင်​ပါတယ်​ဗျ အင်​ဂျင်​ကြီးခြင်းရဲ့အကျိုးကို ​ရေရှည်​မှာ သိလိမ့်​မယ်​ဗျ 2.4 က ဆီစားသက်​သာတယ်​ဆို​ပေ့မယ်​ 3.0 နဲ့ယှဉ်​ရင်​ အနည်းဆုံက​တော့ ပလပ်​ ခဏခဏ လဲရတာပါပဲ ဒါက​တော့ ဖြည့်​စွက်​အကြံပြုတာပါ။
ကဲဆက်​ပြီး GRADE​တွေ (GRADE ​တွေက အများကြီးပါဗျ ​ဈေးကွက်​တွင်းမှာ ​ရှိတဲ့ လူသုံးများတဲ့ GRADE ​တွေကိုသာ ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​တာပါ ဒါ​လေးပဲ ရှိတာမဟုတ်​ပါဘူး အများကြီးရှိပါ​သေးတယ်​ဗျ)
2.4 မှာ AS / AX / AX L EDITION
GRADE ရဲ့ ​ရှေ့က A က 2.4 ကို ရည်​ရွယ်​ပါတယ်​
3.0 မှာဆိုရင်​ GRADE ရဲ့​ရှေ့က M နဲ့စပါတယ်​။
AS GRADE ရဲ့ MODEL CODE က
ANH 10W-PFPSK (2W) 7​ယောက်​စီး
ANH 15W-PFPSK (4W)7 ​ယောက်​စီး
ANH 10W-PRPSK (2W) 8​ ​ယောက်​စီး
ANH 15W-PRPSK (4W) 8 ​ယောက်​စီး
7 ​ယောက်​စီးဆို F ​ပေါ့ 8 ​ယောက်​စီးဆို F ​နေရာ မှာ R ဖြစ်​သွားမှာပါ။
အတွင်းခန်းအမဲ ကျွန်းကွက်​အမဲ ထိုင်​ခုံလဲ အမဲ SPORT & COMFORT MODE SKART ပါတ်​လည် AIRCON ROUND FOG LIGHT အဝိုင်း POWER SLIDE ပါတာလဲလာတယ်​ မပါတာလဲလာတယ်​ ပါခဲ့ရင်​လဲ တဖက်​ပဲပါတယ်​ လိုက်​ကာလဲ အဲ့လိုပါ ပါတာလဲလာတယ်​ မပါတာလဲလာတယ်​ ပါရင်​လဲ ခလုပ်​နဲ့ AUTO မရဘူး ဒီအတိုင်း လက်​နဲ့ဆွဲပိတ်​ပဲ
AX GRADE ရဲ့ MODEL CODE က
ANH 10W-PFPGK (2W)7​ယောက်​စီး
ANH 15W-PFPGK (4W)7​ယောက်​စီး
ANH 10W-PRPGK (2W) 8 ​ယောက်​စီး
ANH 15W-PRPGK (4W) 8 ​ယောက်​စီး
အတွင်းခန်းအဝါ ကျွန်းကွက်​အဝါ လိုက်​ကာပါတ်​လည်​ ဆွဲပိတ်​ပဲ ခလုပ်​နဲ့ AUTO မရ FOG LIGHT ​လေး​ထောင့်​အရှည်​ဖြစ်​သွားပြီး AIRCON ROUND POWER SLIDE 1 ချပ်​
AX L EDITION ရဲ့ MODEL CODE က
ANH 10W-PFPGK-L (2W)7​ယောက်​စီး
ANH 15W-PFPGK-L (4W)7​ယောက်​စီး
ANH 10W-PRPGK-X (2W) 8​ ​ယောက်​စီး
ANH 15W-PRPGK-X (4W) 8​ ​ယောက်​စီး
အတွင်းခန်းအဝါ ကျွန်းအဝါ ထိုင်​ခုံရှန်​မွိုင်းအသား​ရောင်​ POWER SLIDE 1 ချပ်​ စီယာတိုင်​ ကျွန်း ဂီယာဘုသီးကျွန်း AIR CON ROUND အလယ်ေ​လျှောက်​လှမ်းမပါ 8 ​ယောက်​စီး ​ရှေ့ CAM ​နောက်​ CAM..
တချို့က SUNROOF MOONROOF ပါ။
3.0 မှာ MS / MX / MX L EDITION / MZ / MZ G EDITION
MS GRADE ရဲ့ MODEL CODE က
MNH 10W-PFASK (2W)7​ယောက်​စီး
MNH 15W-PFASK (4W)7​ယောက်​စီး
MNH 10W-PRASK (2W) 8 ​ယောက်​စီး
MNH 15W-PRASK (4W) 8 ​ယောက်​စီး
အတွင်းခန်းအမဲ . ကျွန်းကွက်​အမဲ .ထိုင်​ခုံလဲ အမဲ . SPORT & COMFORT MODE . SKART ပါတ်​လည်​ . AIRCON ROUND . FOG LIGHT အဝိုင်း POWER SLIDE မပါပါဘူး . လိုက်​ကာလဲ ပါခဲ့ရင်​ ခလုပ်​နဲ့ AUTO မရဘူး ဒီအတိုင်း လက်​နဲ့ဆွဲပိတ်​ပဲ
MX GRADE ရဲ့ MODEL CODE က
MNH 10W-PFPGK (2W)7​ယောက်​စီး
MNH 15W-PFPGK (4W)7​ယောက်​စီး
MNH 10W-PRPGK (2W) 8 ​ယောက်​စီး
MNH 15W-PRPGK (4W) 8 ​ယောက်​စီး
အတွင်းခန်းအဝါ . ကျွန်းကွက်​အဝါ . လိုက်​ကာပါတ်​လည်​ ဆွဲပိတ်​ပဲ ခလုပ်​နဲ့ AUTO မရ . FOG LIGHT ​လေး​ထောင့်​အရှည်​ဖြစ်​သွားပြီး . AIRCON ROUND . POWER SLIDE 1 ချပ်​ .တချို့တ​လေမှာ ​ရှေ့ CAM ပါ
MX L EDITION ရဲ့ MODEL CODE က
MNH 10W-PFAGK-L (2W) 7​ယောက်​စီး
MNH 15W-PFAGK-L (4W)7​ယောက်စီး
MNH 10W-PRAGK-X (2W) 8​ယောက်​စီး
MNH 15W-PRAGK-X (4W) 8​ယောက်​စီး
အတွင်းခန်းအဝါ . ကျွန်း အဝါ . ထိုင်​ခုံ ရှန်​မွိုင်းအသား​ရောင်​ .POWER SLIDE 1 ချပ်​ တချို့က2ချပ်​ . စီယာတိုင်​ ကျွန်း ဂီယာဘုသီးကျွန်း . AIR CON ROUND . အလယ်ေ​လျှာက်​လှမ်းမပါ 8 ​ယောက်​စီး . ​ရှေ့ CAM ​နောက်​ CAM . တချို့က SUNROOF MOONROOF ပါ .
MZ GRADE ရဲ့ MODEL CODE က
MNH 10W-PFPQK (2W)7​ယောက်​စီး
MNH 15W-PFPQK (4W)7​ယောက်​စီး
MNH 10W-PRPQK (2W) 8 ​ယောက်​စီး
MNH 15W-PRPQK (4W) 8 ​ယောက်​စီး
အတွင်းခန်းအဝါ . FOG LIGHT ​လေး​ထောင့်​အရှည်​ .စီယာတိုင်​ ကျွန်း ဂီယာဘုသီးကျွန်း . AIRCON ROUND။7​ယောက်​စီး ​လျှေက်​လှမ်းပါတာလာသလို့ 8 ​ယောက်​စီး ​လျှောက်​လှမ်းမပါတာလဲလာတယ်​ . SPORT & COMFORT MODE . လိုက်​ကာ AUTO .POWER SLIDE DOOR က 1 ချပ်​လဲ လာသလို2ချပ်​လဲ လာတယ်​ ​နောက်​ဖုံ​လဲ SLIDE ပါတက်​တယ်​ . 5.1 SOUND SYSTEM ပါတယ်​ . ယဉ်​​မောင်းရဲ့ ထိုင်​ခုံက ​မော်​တာနဲ့ပါ . SUNROOF / MOONROOF ပါတာများတယ်​ . ​ရှေ့ TV ခါး TV . ​ရှေ့ CAM ​နောက်​ CAM . တချို့ဆို ရှားမှရှား CRUSE CONTROL ရယ်​ RADER ရှဲလ်​ ရယ်​​တောင်​ပါ​သေးတယ်​ . ထိုင်​ခုံလယ်​သာစိနဲ့ . HEATER ​​တောင်​ပါ​သေးတယ်​ မလာဘူးမ​ပြောနဲ့ လက်​​တွေ့ပြမယ်​ ချက်​စီက MZ ပဲ ထွက်​တယ်​ ပစ္စည်းက​တော့ စုံသလားမ​မေးနဲ့ တချို့ MZ G EDITION ​တောင်​ သူ့​လောက်​မစုံဘူး ချက်​စီမှာ MZ G မဖြစ်​တာတခုပဲ...
အမြင့်​ဆုံးက​တော့ MZ G EDITION
အဲ့MODEL CODE နဲ့ထွက်​မှ MZ G EDITION အစစ်​ပါ ဘယ်​​လောက်​ပဲ ပစ္စည်း​တွေ စုံ​နေပါ​စေ အဲ့MODEL CODE နဲ့မဟုတ်​ရင်​ MZ G EDITION အမှန်​မဟုတ်​ပါ။
ALPHARD G မှာ
MNH 10-PFKAQ-G (2W)
MNH 15-PFKAQ-G (4W)
ALPHARD V မှာဆိုရင်​
MNH 10-PFKAQ-R (2W)
MNH 15-PFKAQ-R (4W)
အ​ပေါ်က GRADE ​တွေမှာလို7​ယောက်​စီး 8 ​ယောက်​စီး2မျိုးမလာတဲ့ အတွက်​ PFKAQ ပဲ ရှိမှာပါ 8 ​ယောက်​စီး PRKAQ ဆိုပြီး မလာ​တော့ပါဘူး။
အတွင်းခန်းအဝါ . FOG LIGHT ​လေး​ထောင့်​အရှည်​ .စီယာတိုင်​ ကျွန်း ဂီယာဘုသီးကျွန်း . AIRCON ROUND .
7 ​ယောက်​စီး ​လျှေက်​လှမ်းပါတာပဲလာတယ်​ . SPORT & COMFORT MODE . လိုက်​ကာ AUTO .POWER SLIDE DOOR က2ချပ်​လဲ ​နောက်​ဖုံ​လဲ SLIDE တယ်​ . 5.1 SOUND SYSTEM ပါတယ်​ . ယဉ်​​မောင်းရဲ့ ထိုင်​ခုံက ​မော်​တာနဲ့ တချို့ဆို ​ဘေးက ပါစင်​ဂျာခုံပါ ​မော်​တာပါတယ်​ . SUNROOF / MOONROOF . ​ရှေ့ TV ခါး TV . ​ရှေ့ CAM 3D ​နောက်​ CAM . CRUSE CONTROL ရယ်​ RADER ရှဲလ်​. ထိုင်​ခုံလယ်​သာစိနဲ့ . HEATER ... စသည်​ဖြင့်​ ပါတာရွှတ်​ရတာ​တောင်​​မောတယ်​ ... ပစ္စည်းက အစုံပါတာလဲ ရှိသလို့ တချို့အချက်​​တွေ မပါတာလဲ ရှိတယ်​ဗျ အဓီကက MODEL CODE မှာ MZG ထွက်​ရင်​ အဲ့ကားက MZG ပါပဲ..
1 st GEN မှာ HYBRID လဲလာတယ်​ဗျ သူ့ရဲ့ MODEL CODE က
ATH 10W-PFXGB (07S)
ATH 10W-PRXGB (08S)
ချွင်းချက်​အ​နေနဲ့ တချို့ GRADE ​တွေမှာ PREMIUM / EDITION ​တွေ ထပ်​ရှိပါတယ်​ ​​ယေဘုယ အားဖြင့်​​တော့ ဒီ MODEL CODE ​တွေပါပဲ ​နောက်​က 1 လုံး2လုံး​လောက်​​လေးပဲ ပိုပါလာတတ်ပါတယ်​။
​အောက်​မှာ NAME PLATE​တွေရဲ့ ပုံ​လေး​တွေပါတွဲတင်​ပြီး လက်​​တွေ့ခွဲပြထားပါတယ်​။